Hordhac: Barca vs Espanyol – Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Final-ka Catalan Super Cup %
Kooxaha Barcelona iyo Espanyol, ayaa waxay wada ciyaari doonan kulan ka tirsan Final-ka tartanka Maxaliga ah ee Catalan Super Cup-ka, kaasoo laga dheelo gudaha Gobolka Gooni isku taaga ah ee Catalonia.
Ciyaartaan ayaa waxay kusoo aadeysaa iyadoo Barcelona ay guul weyn ay kasoo gaartay dhigeeda Atletico Madrid, ciyaar ka tirsaneed La Liga, markaasoo ay kusoo badisay Bluagrana 1-0, xili goolka uu dhaliyay Lionel Messi.
Espanyol, ayaa dhankeeda waxay tahay mid Bareejo 1-1 ah, lasoo dhaafi weyday ciyaartii ugu dambeysay dhigeeda Levante, ciyaar La Liga ka tirsaneed, waxayan doonayaa inay dar-daraan kooxda ay xifaaltamaan ee Barca.
Ernesto Valverde, tababaraha Barcelona, ayaa wuxuu nasiyay ciyaartaan qaar kamid ah, ciyaartoydiisa ugu muhiimsan, sida Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Basquets, Pique, Coutinho iyo kuwa kale oo badan.
Laakiin, waxaa kaliya safka koowaad xidigaha ka tirsan ee ciyaartaan dheeli doona, kamid ah: Yerry Mina iyo Osman Dembele, kuwaasoo fasal ciyaareedkan kusoo biiray kooxda reer Catalonia ee Barcelona.
Valverde, hogaamiyaha Barcelona ayaa liiska ciyaartoyda ee uu kulankaan usoo magacowday waxaa kasoo muuqday 12 ciyaaryahano, kuwaasoo ka tirsan kooxda Junyarka ee Bluagrana, kuwaaso uu fursad badan siiyay.
Geesta kale, kooxda kubada cagta Espanyol, ayaa waxa nan ka maqnaan ciyaartaan hal ciyaaryahano oo weyn, waxayna heli kartaa saf ciyaareed xoog badan, kuwaasoo si weyn loosoo abaabulay
Tartanka: Catalan Super
Garoonka: Camp e’Esport
Saacadda: 20:30 [Fiidnimo, Waqtiga Geeska Afrika]